काभ्रेमा विप्लवका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान, प्रभावशाली नेता रहेको सूचनामा पुगेको थियो प्रहरी ! – Online Bichar
काभ्रेमा विप्लवका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान, प्रभावशाली नेता रहेको सूचनामा पुगेको थियो प्रहरी !
Online Bichar 20th March, 2019, Wednesday 9:52 AM
काठमाडौं, ६ चैत्र । एनसेल मुख्यालय र बसुन्धरामा बम विस्फोट गराउने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले काभ्रेमा गोली चलाएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले काभ्रेको रोसी गाउँपालिका–२ खहरेपाँगुबाट विप्लव नेतृत्वको माओवादीका २ कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
विप्लव समूहको मध्ये ब्यूरोका विशेष कार्यकता पक्राउ गरिएको भए पनि नाम भने गोप्य राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।